Amnesty International : “Tsy Entambarotra Ny Mpitsoaponenana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Marsa 2016 4:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, English, Español, Português
Siriana sy Iràkiana mpitsoaponenana avy any Tiorkia, tonga eo amin'ny nosy Grika, Lesbos. Sary: Wikimedia Commons, (CC BY-SA 4.0)
[Lahatsoratra nivoaka voalohany tamin'ny fiteny Portiogey ny 17 Martsa 2016] “Hoy i Portiogaly : ‪#‎StopTheDeal‬ #AtsaharoLayFifanarahana! Saiky manerana ny firenena, feno mpikatroka mitaky amin'ny governemanta portiogey mba hanao TSIA amin'ilay fifanarahan'ny Fiombonambe Eoropeana mampietry ireo mpitsoaponenana ho toy ny entambarotra”, hoy ny tatitry ny sampana portiogey ao amin'ny Amnesty International (AI) ao amin'ny pejiny Facebook. avy amin'ny GIPHY (Sary: Ricardo Rodrigues da Silva /Amnesty International)
Ny 7 martsa 2016, niditra taminà fifanarahana amin'i Tiorkia ny Filankevitra Eoropeana mba hampitsaharana ny firohotan'ireo mpifindra monina mankao Gresy. Miaraka amin'io fifanarahana io, ifampiraharahàna ihany koa ny ho fidiran'i Tiorkia ho ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana, izay mandroso hevitra “hanakalozana ireo mpifindramonina an-tsokosoko amin'ireo siriana mpifindra monina”. Miteraka fifanoherankevitra io fandaharanasa io satria mampitovy “ny olombelona amin'ny entambarotra” :
Isaky ny mpifindramonina iray “tafaverina” any Tiorkia, dia handray siriana iray mpitsoaponenana “ara-drariny” ny Fiombonambe Eoropeana, avy amin'ireo 2,7 tapitrisa miaina ao amin'ireo toby ao Tiorkia.
Ity fifanarahana ity, niadiana hevitra tao amin'ny Fivoriana antampon'ny Eoropeana niaraka tamin'i Tiorkia, tamin'ny 17 sy 18 martsa, dia noraisin'ny Kaomisaria Ambony Ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny Mpitsoaponenana (HCNUR) ho “fanitsakitsahana ny lalàna iraisampirenena”.
Ity fifanekena ity dia heverin'ny Amnesty International ho “tsy mataho-tody, lozabe ary fitondrantena tsy mendrika”. “Olombelona, fa tsy entambarotra” no resahana eto. Tsipihan'ilay ONG fa “hatrizay dia tsy firenena azo antoka ho an'ireo mpitsoaponenana velively mihitsy” i Tiorkia sady avoitrany fa firenena “mpanagadra tsy araka ny lalàna sy manao ratsy fitondra ireo mpitsoaponenana, mpitifitra ireo siriana manandrana miampita ny sisintany ary efa nandroaka mpangataka fialokalofana”.
Mampietry ny mpitsoaponenana ho toy ny entambarotra ilay fifanarahan'ny Fiombonambe Eoropeana-Tiorkia. Andro 2 sisa no ananantsika mba #HanakananaLayFifanarahana. Mihetseha ! Avereno bitsihana
An'izao tontolo izao ny olan'ny mpitsoaponenana.
Araka ny Oxfam, olona manakaiky ny 60 tapitrisa amin'izao fotoana izao no “nafindra toerana” ivelan'ny toerana nonenany sy ny firenen'izy ireo, “ny isa ambony indrindra tsy mbola fahitan'ny Firenena Mikambana hatramin'ny Ady Lehibe Faharoa. Manodidina ny dimy hetsy amin'izy ireo no tonga ao Eoropa, saingy ny ankamaroany dia mjanona eny amin'ny manodidina ny firenena niaviany”. Avoitran'ny Oxfam ihany koa fa “i Libanona, miaraka amin'ireo vahoakany 4,5 tapitrisa, no miatrika ny fanamby goavana indrindra amin'ny fandraisany mpitsoaponenana 1,2 tapitrisa avy amin'i Siria mpifanolo-bodirindrina aminy”.
Angatahan'ny Amnesty International ireo Portiogey mba hiray hina amin'izao tontolo izao ary hanao antso ho an'ny Kaomisiona Nanionalin-dry zareo misahana ny Zon'Olombelona mba hanaovan'i Portiogaly TSIA amin'ity fifanarahana ity, ka ny tambajotra sosialy Twitter sy Facebook no ampisain'izy ireo miaraka amin'ny tenifototra #StopTheDeal :
Atsaharo io fifanarahana io, “aza amidy toa entambarotra” ny mpitsoaponenana
Misy fanangonantsonia iray hanaovana TSIA amin'io fifanarahana io mivezivezy ao amin'ny aterineto. Afaka manao sonia ianao, ato amin'ny change.org.